भाद्र ३१, २०७८ बिहिबार 44
काठमाण्डौ । संखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको ज्या’न लि’एको आरोपमा प्रहरीले प,क्राउ गरेका लोकबहादुरलाई हिजो नै प्रहरीले सार्बजनिक गरेको थियो । प्रहरीले मृ,तककै १३ दिने पारिवारिक नाताका आफन्त लोकबहादुर कार्कीलाई सामूहिक ज्या’न लि’ए’को आरोपमा प,क्राउ गरेको थियो । उनि एक सामान्य कृषक थिए ।
प्रहरीको बयानमा आरोपी लोकबहादुरले भने ‘ हजुरबुवाले म’र्ने बेलामा तेजबहादुरलाई ‘यिनीहरूलाई स्याहारसुसार गर्ने जिम्मा तिमीहरूको हो। यिनीहरूको आर्थिक अवस्था अलि कमजोर छ। तैंले हेर्नु’ भनेका थिए। हामी भन्दा आर्थिक अवस्था राम्रो भएपनि तेजबहादुरले हामीलाई हेरेनन्। वास्तै गर्दैनथे।’प्रहरी स्रोतका अनुसार आरोपीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीका प्रहरीसमक्ष आफ्ना अ पराध स्वीकार गरेको जनाइएको छ ।
Prevकाठमाडौंमै घ,ट्यो अ,नौठो घ,ट्ना, प्रहरी नै पुगेर लियो नियन्त्रणमा !
Nextबाहिरियो पुरै भिडियो : पानीले उनको पुरै खुटा भिजि सकेको रहेछ ! सेती नदीमा जानु आघि दुई साथीहरुलाई यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन् ! (भिडियो
चिसो बडे संगै फेरि पनि देशका यी स्थानमा बर्षासहित चट्याङको सम्भावना
झाडीबाट राती आवाज आउँदा कसैले वास्ता गरेनन्, बिहानपख हेर्दा ठूलो पछुतो …….
स्वास्थ्यकर्मीका लागि रोजगारीको अवसर (सूचना सहित)